Ukhuseleko usebenzisa iikhamera ze-IP? Esi sesona sipho silungileyo somzuzu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Ukuzenzekelayo ekhaya, Ikhaya
Ngakumbi nangakumbi kuthi sisebenzisa ubuchwepheshe bekhamera ye-IP ukutyala imali kwiinkqubo zokhuseleko. Ingcali eqinileyo njenge I-Hikvision ngoku ibekwe kakuhle kwintengiso. Ngoku enkosi kwi-Lightinthebox siya kuba nakho ukusebenzisa izibonelelo ukuya kuthi ga kwi-30 yeedola kwisaphulelo kwiinkqubo zekhamera ye-IP kunye neenkqubo zokhuseleko.
Ngotyalo-mali oluncinci ungenza ukuba wena kunye nezakho niziva nikhuselekile ekhaya, kwaye nokhathalela ishishini lakho. Kodwa oku kufuneka uthembe iifemu ezikukhuthazayo ukuba uzithembe, ukhetho lweekhamera esiza kuthetha ngalo ngokulandelayo zinodumo oluninzi, ke isaphulelo sabo sinomtsalane ngakumbi kunangaphambili, ungaphoswa.
IHikvision yinkampani eyandisiweyo ixesha elininzi eSpain kwaye sele ithandwa ngenxa yokuba iikhamera zayo kunye neenkqubo zokhuseleko ezipheleleyo unesoftware yohlobo oluvumela ukuba ukwandise umgangatho womfanekiso, amandla esignali, kwaye ngokuqinisekileyo yenza ukuba olu hlobo lobuchwephesha lufumaneke nakubani na, kuba aludingi kufakelwa ngabafakeli beengcali, phantse nabani na angadibanisa inkqubo yabo yezokhuseleko yeHikvision.
Ngokukodwa i-Hikvision ivelisa ngaphezulu kweempawu ezingamashumi amathathu ezahlukeneyo e-China, kwaye ineenkampani ezilishumi elinesibhozo zizonke ezisasazeke kwihlabathi liphela, ke ngoko sijamelene nomzekelo wesimbo sikaHuwei, oko kukuthi, inkampani eqinisekileyo ukuba ayiveli kuba ivela eTshayina iya kuthi isinike imveliso enexabiso eliphantsi kunye nomgangatho osezantsi, ngokuchasene noko.
1 Umboniso wekhamera ye-Hikvision ye-IP
2 Thenga iikhamera zeHikvision ngesithembiso
Umboniso wekhamera ye-Hikvision ye-IP
Hikvision iye Uluhlu olubanzi lweekhamera ze-IP, ukusuka kwi-classic Fixed Lens Bullet kunye ne-Fixed Lens Dome, ukuya kwi-EXIR eyahlukileyo kunye neemodeli ezineenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya nemodeli yayo yokuloba enomdla. Phakathi kwebhokisi ye-Lightinthebox siza kufumana uluhlu olubalulekileyo lweekhamera ze-IP ezinefomathi ye-redorando, eya kuthi ijikeleze isisombululo se-4MP, kodwa ngenxa yesivamvo sabo bayifota kakuhle.
Kodwa ayisiyiyo kuphela iikhamera eziza kubakho kunikezelo, sinokufumana iseti epheleleyo yolawulo lwesixhobo, iinkqubo apho siya kuthi sikwazi ukufikelela kuyo yonke imifanekiso kwaye silawule umxholo esiwubukeleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona nto ibalulekileyo (kwaye iyabiza) yinxalenye yeenkqubo zokhuseleko ngamajelo kamabonakude avaliweyo. Ezi zixhobo zinokwahluka ukusuka kwi- € 150 ukuya kwi- € 800, ipheKungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba sikwazi ukusebenzisa isibonelelo esisinikwa yi-Lightinthebox namhlanje.
Thenga iikhamera zeHikvision ngesithembiso
Ibhokisi elula isinika uthotho lweekhowudi zesaphulelo esinokuthi singene kuzo, koku siza kukhetha nayiphi na ikhamera okanye iinkqubo esizinikwayo LE LINK kwaye siyakusebenzisa ikhowudi ngokuxhomekeke kwisaphulelo esifuna ukusifumana:
Isaphulelo se- $ 10 nge $ 100- I-HIKV100
Isaphulelo se- $ 20 nge $ 200- I-HIKV200
Isaphulelo se- $ 30 kuyo yonke i-300 yeedola- I-HIKV300
Siyathemba ukuba uyawavuyela la maxabiso mahle!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ukhuseleko usebenzisa iikhamera ze-IP? Esi sesona sipho silungileyo salo mzuzu